Guddi Qalabka Solar, Power Inverter, Xakamaynta Maaliyadda Qalabka, Control PWM, Shirkadaha Shiinaha iyo Qalabka
Beddelidda Sine Wave Wave
PWM Xakamaynta Maaliyadda ee Maaliyadda
Xakamaynta Maaliyadda ee Maaliyadda
Nidaamka Hoyga Qalabka
Nidaamka Nalalka Nalalka
Nidaamka Awooda Sare
Cuntooyinka optoelectronic Green
tiknoolijiyada dheeriga ah
Kaarboon yaryar, ilaalinta deegaanka, tamarta tamarta.
Longchi - Love Love
Habeenkii, iyada oo la adeegsanayo nidaamka iftiinka iftiinka
albaabbada qoraxda loogu talagalay isticmaalka guriga
dhaliyayaasha tamarta qoraxda
xirmooyinka tamarta qorraxda
Awoodda qoraxda ee guriga
tamarta qoraxda guriga
nidaamka qoraxda guriga
Zhejiang Longchi Technology Co., Ltd waa ururinta horumarinta alaabta qoraxda, wax soosaarka, iibinta iyo dhismaha adeegyada shirkadaha tamarta cusub. Maareynta wax soo saarka adag ee adag, tayada wax soo saarka iyo xasiloonida, ayaa shahaadada maamusha tayada maamulka ISO9001, sheyga ugu weyn ee laga helayo warbixinta kormeerka tayada ee SGS, shahaadada CE, shahaadada ROHS iyo helitaanka shahaadada saxda ah.
Warshadu waxay daboolaysaa aagga mitirka labajibbaaran ee 56667, dhismaha dhismaha mitirka labajibbaaran ee 55935, oo leh caasimad diiwaan gashan oo ku taal 20million.
Waxyaabaha ugu muhiimsan waa nidaamka casriga PV, nidaamka tamarta qoraxda, 80% ee badeecadaha waxaa loo dhoofiyaa Afrika Yurub, North America, Australia. Bariga Dhexe, Koonfurta Aasiya, oo lagu amaaney macaamiisha gudaha iyo dibedda, waa run ahaantii "waa shirkad yar oo kaarboon ilaalinta cimilada ee tamarta korontada dhalaalaysa" .Shirkadu waxay leedahay shirkado badan oo ka shaqeeya gudaha iyo dibaddaba, waxay ku guuleysteen inta badan macaamiishooda aqoonsi iyo ammaan. oo doonaya inay u adeegaan adeegga heerka koowaad ee lala yeesho macaamiisha cusub iyo kan ajnabiga ah ee cusub iyo kuwa duugoobay ee gacanta ku haya si ay u abuuraan "sunshine" nolosha. Akhri wax dheeraad ah
Waxaan siinnaa adeegyo isgaarsiineed iyo adeegyo taageero macaamiisha ka socda adduunka oo idil.
Si aad u bixiso adeeg degdeg ah oo lagu kalsoonaan karo oo wax ku ool ah, si loo daboolo baahida adeegyadayada adeegga.
Waxaan ka caawinnaa in ka badan macaamiisha caalamiga ah ee 3,000 - in ka badan 30% macaamiisha ugu caansan ee adduunka ee xarumahooda ganacsi iyo inay xogta bulshada u gudbiyaan go'aamada ganacsiga miisaaman.
Tamarta qoraxda waa miisaan culus oo diirimaad leh oo ka timaadda Sunta oo la xaddiday iyadoo loo adeegsanayo noocyo kala duwan oo isdaba-tiknoolaji ah sida kuleylka kulaylka, sawirada, tamarta xiddiga kuleylka, nashqadda xiddig, dhirta tamarta cusbada iyo kiimikada farsamada ... Akhri wax dheeraad ah
intee in le'eg yihiin albaabbada qoraxda ugu dambaysa
Sanadaha 25 (ama ka badan). Tani waxay noqon kartaa hubinta ganacsiga caadiga ah ee ka imanaya kuwa Tier 1. Dhab ahaantii, kalkaaliyeyaasha xiddiguhu waxay sii socon doonaan muddo ka badan tan: hubinta badanaaba waxay damaanad qaadaysaa in albaabadu ay ka shaqeeyaan kor u kaca siddeedaad ee awoodda codbixinta marka shan iyo labaatan sano ah. Daraasad ay soo saartay NREL waxay muujineysaa in badi ka mid ah albaabadu wali yahiin ... + Read more
Immisa kamarado qoraxda ah ayaan u baahanahay gurigeyga?
Go'aaminta miisaanka nidaamka tamarta qoraxdaada waxay bilaabmaysaa suaal sahlan: maxay yihiin tirada lambarada xiddigaha? Maadaama ay dadweynuhu rabaan in ay keenaan tamar ku filan si ay si buuxda u tirtiraan biilkooda korontada, tallaabada ugu horreysa waxay ku xirantahay nidaamka qiyaasta qiyaasta awoodda ku filan si loo fuliyo isticmaalka unugga ... + Read more
Sidee Ayuu Qabanayaa Xayaysiinta Qalabka?
Lagu dhajiyay sida tamarta tamarta leh ee sanado badan, sanaadiiqda xayndaabyada qoryaha iyo calaamadaha cirifka, waxayna fududeeyeen in ay sii wadaan orbiter awood u leh. hase yeeshee si kastaba ha ahaatee, ma shaqeeyaa gawaarida? Si fudud loo dhigo, qorraxda qorraxda waxay u shaqaysaa u ogolaanaysaa sawirada, ama qaybaha qorraxda, inay garaacaan electrons xor ka ah jilayaasha, taasoo dhalinaysa socodka korantada. ... + Read more
ADD.: NO.20 Wadada Waqooyiga Guodao, Aagga Shaybaadhka Shiinaha, Degmada Daixi, Degmada Wayn, Degmada Huzhou, Gobolka Zhejiang.